Votoatin'ny fifandraisana, angona ho an'ny mpanjifa tokony harahinao
Zoma 6 Novambra 2015 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Muhammad Yasin
Na dia azontsika rehetra atao aza, amin'ny ankapobeny, dia manaiky fa ny atiny ifanakalozan-kevitra dia tsy “zava-baovao”, ny fandrosoana amin'ny haitao marketing dia nahatonga ny atiny ifanakalozana ho mahasoa kokoa amin'ny ezaky ny marketing iray. Most karazana atiny fifandraisana avelao ny marika hanangona vaovao be dia be momba ny mpanjifa - fampahalalana azo ampiasaina hamitana tsara kokoa ny filan'ny mpanjifa ary hanampy amin'ny ezaka amin'ny varotra ho avy. Zavatra iray sahirana amin'ny mpivarotra maro, na izany aza, ny famaritana izay karazana fampahalalana tian'izy ireo angonina amin'ny atiny ifanakalozana. Amin'ny farany, olana amin'ny famaliana ity fanontaniana volamena ity: "Inona avy ireo data ho an'ny mpanjifa no tena mahasoa indrindra amin'ny tanjon'ny fikambanana?" Ireto misy sosokevitra vitsivitsy momba ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa izay mety indrindra hanombohana fanarahana mandritra ny fampiroboroboana atiny manaraka momba anao:
Mety ho toa miharihary ny fanangonana mailaka sy nomeraon-telefaona, saingy ho gaga ianao fa firy ny olona tsy manao an'io. Misy marika maromaro any izay mamorona atiny fifanakalozan-kevitra mahaliana ho an'ny fanentanana ny marika; ka ny fanangonana angon-drakitra dia miafara amin'ny famonoana ao ambanin'ny karipetra.
Na lalao na fampiharana fanaingoana mahafinaritra, dia mbola afaka mandray soa amin'ny fanangonana izany vaovao izany ny marikao. Raha tsorina, ny marikao dia mety mitazona fampiroboroboana lehibe izay tadiavinao ho an'ireo mpanohana ny marika (toy ireo izay nifandray tamin'ny appanao) hahafantatra momba izany. Ary tsy hoe tianao ho fantatr'izy ireo fotsiny izany, fa tianao hampiasa ilay fampiroboroboana izy ireo rehefa mividy amin'ny fivarotana anao izy ireo.
Ankehitriny, azoko tsara fa misy fotoana izay tena tsy "mampisy dikany" ny mangataka fampahalalana momba ny fifandraisana. Azoko. Alohan'ny (na aorian'izany aza) milalao lalao dia tsy misy tena te hizara ny mombamomba azy ireo. Na dia fantatrao aza fa hampiasa ny mombamomba ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fomba ara-drariny, ara-dalàna ary feno fanajana ianao dia mbola maro ny mpanjifa matahotra anao tsy hanao izany. Soa ihany, misy zavatra iray azonao atao izay tena nanampy manokana an'ireo marika marobe niarahako niasa - ary izany dia manome karazana fanentanana ho setrin'ny fampahalalana ifandraisana fototra. Rehefa dinihina tokoa, ahoana no hanavotany ny fanomezana na ny lokany raha tsy fantatsika hoe iza izy ireo?
Ny fandrisihana dia mety ho lehibe na kely araka ny fahitan'ny marika anao. Rehefa avy milalao lalao na manao fanadihadiana fohy (na inona na inona atiny misy ifandraisany, tena), azonao atao ny manontany raha te-hisafidy toerana izy ireo hahazoana loka lehibe na misafidy handray tapakila na fanomezana . Mazava ho azy, ny tanjon'izany rehetra izany dia ny olona toy ny entana maimaimpoana (na manana ny vintana hahazoana zavatra maimaim-poana). Ireo mpanjifa dia hirona kokoa hanome ny mombamomba azy ireo mba hifandraisana amin'izy ireo momba ny fandrisihana.
Tsy manam-paharoa amin'ny Google Analytics, ny fanaraha-maso ny hetsika dia ny fanarahana ny hetsika amin'ireo singa mifandray amin'ny tranokalan'ny marikao. Ireo hetsika (na "hetsika") ireo dia mety misy karazana fifandraisana - ny zava-drehetra manomboka amin'ny fikapihana ny bokotra play / fiatoana amin'ny horonan-tsary, ny fandaozana ny forme iray, ny fandefasana form, ny famelomana lalao, ny fisintomana rakitra sns. . Saika ny fiaraha-miasa rehetra eo amin'ny haino aman-jery fifaneraseran'ny marikao dia «hetsika iray».
Ny tena manampy ny fanaraha-maso ny hetsika dia ny manome fomba fijery tsara momba ny fomba fahitan'ny mpanjifanao ny tranokalanao ary koa ny fahalianan'izy ireo amin'ny atiny. Raha manambara ny fanarahan-dia ny zava-nitranga fa ny olona dia mamely ny bokotra lalao fotsiny amin'ny lalao iray, dia mety ho famantarana izany fa mankaleo ilay lalao na tsy dia sarotra loatra. Etsy ankilany, hetsika "filalaovana" maromaro no mety hanondro fa tena mankafy ny lalao eo amin'ny tranonkalanao ny olona. Toy izany koa, ny tsy fahitana hetsika / hetsika "misintona" ampy dia mety ho famantarana tsara fa ny atiny azo sintomina (torolàlana e, horonan-tsary, sns) dia tsy mahaliana na mahasoa ampidirina. Rehefa manana an'ity karazana data ity ny marika dia afaka manatsara ny atiny sy ny paikadim-barotra amin'ny ankapobeny izy ireo.
Ny fampidirana ny fizotran'ny hetsika amin'ny tranokalanao dia mety ho sarotra ihany, saingy soa ihany, misy maromaro ny fomba fitarihana any (ao anatin'izany ny iray ao amin'ny Google) afaka manampy anao izany ampiharo ny fanarahana hetsika GA mora foana. Misy ihany koa ireo torolàlana tena tsara momba ny fidirana sy famakiana tatitra avy any GA momba ireo hetsika hitanao.
Valiny safidy maro
Ny karazana mombamomba ny mpanjifa farany izay tena atoroko ny fanarahana dia valiny safidy marobe amin'ny quiz, ny fanadihadiana ary ny mpanombatombana. Mazava ho azy fa ny fanontaniana sy valiny safidy maro dia miovaova be, saingy misy fomba 2 hanarahana ny valiny safidy maro afaka manampy ny marikao! Ho an'ny iray, toy ny fanarahana hetsika, fanontaniana sy valiny safidy marobe dia hanome ny marikao hevitra tsara kokoa momba izay tadiavin'ny ankamaroan'ny mpanjifa aminao. Amin'ny alàlan'ny fanomezana ny mpanjifanao safidy voafetra vitsivitsy hisafidianana (ao anatin'ny fanadinanao na ny fanadihadiana ataonao), dia mamela anao hizara ny valiny tsirairay amin'ny isan-jato; hahafahanao manasokajy ny mpanjifa sasany amin'ny valiny manokana. Ohatra: Raha mametraka ny fanontaniana ianao, "iza amin'ireo loko ireo raha tianao?" ary manome valiny 4 azo atao ianao (Mena, manga, maintso, mavo), azonao atao ny mamaritra hoe inona no loko malaza indrindra amin'ny isan'ny olona nifantina valiny iray. Amin'ny ankapobeny dia tsy azo atao amin'ny valinteny feno endrika.
Antony iray hafa mety mahasoa ny fanarahana valiny amin'ny safidy maro satria ny marika dia afaka manatsara bebe kokoa amin'ireo mpampiasa manokana izay nanome valiny iray (Ohatra: misintona ny lisitry ny mpampiasa namaly ny lokony ankafiziny ho "mena"). Io dia ahafahan'ny marika mampifantoka ny ezak'izy ireo amin'ny marketing amin'ny mpampiasa manokana ao amin'io sokajy io - na amin'ny alàlan'ny marketing e-mail, mailaka mivantana na antso an-tarobia. Ho fanampin'izay, mety ho hitanao fa ny mpividy izay mamaly amin'ny valiny manokana dia misy iraisan'ny sasany tokony ekena. Ny fanontaniana lehibe marobe momba ny safidy marobe dia azonao apetraka matetika apetraka: fividianana fe-potoana, marika tadiavina, marika ankehitriny - na inona na inona mety hanampy amin'ny adihevitra amin'ny ho avy.
Na inona na inona tanjona faratampony amin'ny atiny ifanakalozanao, ny fanangonana angon-drakitra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa dia mendrika ezaka. Miaraka amin'ireo mpifaninana vaovao mitsimoka isan'andro, dia voatery amin'ny marikao ianao hahafantaranao hoe iza ny mpanjifanao sy izay tadiaviny. Ny fandrosoana amin'ny teknolojia dia tsy vitan'ny nanamora ny fanangonana ireo angon-drakitra ireo, fa nanamora ny fanaovana izany. Miaraka amin'ny loharanom-pahalalana rehetra azon'ny mpivarotra, tsy misy fialan-tsiny tsy hanarahana ny zava-drehetra!